रुट परिवर्तन गरेर जाँदा पनि एम्बुसमा परे काँग्रेस उम्मेदवार कार्की, जिप चालकले दिए यस्तो बयान — Imandarmedia.com
रुट परिवर्तन गरेर जाँदा पनि एम्बुसमा परे काँग्रेस उम्मेदवार कार्की, जिप चालकले दिए यस्तो बयान
काठमाडौं : बाटोभरि एम्बुस छ भन्ने खबर पाए पनि कांग्रेस उम्मेदवार नारायणबहादुर कार्की (६७) विचलित भएनन्।
हातमा गीताको पुस्तक लिएर भाइलाई बोलेरो जिप हाँक्न लगाई रुट फेर्दै जंगलको बाटोबाट गन्तव्यमा पुग्न लाग्दा बीच बाटोमै एम्बुसमा परे। उनीसहित गम्भीर घाइते तीन जनाको शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा उपचार भइरहेको छ। अन्य चारजना सामान्य घाइते छन्।
एम्बुसस्थलको दायाँतिर ठूलो डिल थियो। पड्कँदा एक फिट माथि उडेको गाडी भुइँमा बज्रँदा अनियन्त्रित भयो। तर, जीप बायाँतिर ढल्कियो। चालक कार्की च्यापिए। उनीमाथि उम्मेदवार कार्की र नेविसंघ नेत्री कटवाल एकमाथि अर्को खप्टिए। लौ मलाई छिटो झिक है …. उम्मेदवार कार्की भन्दै चिच्याए।
त्यसपछि पछिल्लो सिटमा बसेका सामान्य घाइते नवराज पौडेललगायतले झ्यानाकुटी पार्दै उठाए। सामान्य घाइते पौडेलले भने, ‘माथि गएर हेर्दा ठूलो खाल्डो रहेछ। खाल्डोबाट सानो तार पनि माथि लगेको देखियो।’
मास्क लगाएर आएका युवाले एम्बुस बिच्छ्याएको स्थानीय महिलाले बताएका छन्। अनुहार छोपिने गरी मास्क लगाएका युवा जम्मा भएपछि स्थानीय महिलाले सोधपुछ गरेका थिए।
‘सडक बिग्रेको रहेछ। त्यो बनाउन आएका हौं भने। दुई जना रूखमा छेकिएर बसेका थिए। अरू माथि थिए’, घटनास्थलमा आएका महिलाको भनाइ उद्धृत गर्दै घाइते युके एफएमका अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘बाहिर हल्ला नगर्नू, भनेदेखि मार्छौं भनेर धम्क्याएका थिए।’ चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न जाँदा प्रयोग हुने बाटो बदलेर जाँदा पनि एम्बुसमा परेकाले घाइतेहरू सुनियोजित घटना भएको बताउँछन्।
बाटोभरि खाल्डाखुल्डी छन्। एम्बुस हुन सक्छ है भन्दै फोन आएपछि बाटो नै फेरिएको थियो। उम्मेदवार कार्कीका छोरा निरजलाई फोनमा खबर आएको थियो। स्थानीय उदयपुरगढी माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक कार्की राजीनामा दिएर राजनीतिमा लागेका थिए। उनी ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा विजयी भएका थिए।
२०७४ मंसीर १४ गते प्रकाशित
कर्णालीका ३०७ गाउँ असुरक्षित, सुरक्षित स्थानमा सार्ने सरकारको सुरसार छैन
बल्ल ट्राफिक बत्ती मर्मत गरिदै, आधा दर्जन स्थानमा यात्रु प्रतीक्षालय
कहाँ हराए सुन तस्करीका यी ठूला माछा ?
हृदयविदारक खबर : गास जुटाउन जाँदा लाश बनेर फर्कनुपर्यो